Huizhou Jiahong Maindasitiri Co,. Ltd. yakavambwa mugore ra2010, ikozvino yave kuHuizhou guta reruwa rweGuangdong, nzvimbo yeruzhinji inovhara anopfuura zviuru makumi maviri emamirimita, inova inyanzvi yeEVA zvigadzirwa fekitori, yakaumba kuunganidzwa kuvandudza, dhizaini, kugadzira uye kutengesa seimwe iyo eva furo mats indasitiri emakambani.
Kunze kwefekitori uye matura, isu zvakare tine yakajeka uye yakanaka hofisi, dhomitari uye kantini, izvo zvivakwa zvakabatana zvese zvinoshanda pano, semhuri hombe.
Yedu fekitori ine tara yakakwana yekugadzira, mbishi zvinhu, furo, muchina kugadzirisa, kucheka, kupindirana mapuzzle, mhando cheki, kudzikira kurongedza, PVF bhegi kurongedza, katoni kurongedza, imba yekuchengetera, imba yekuchengetera ... chikamu chega chega chinotariswa zvakanyanya nemaneja. inosvika pamatunhu-yakatarwa zviyero kubva pakusarudzwa kwezvinhu kusvika mukugadzirwa, uye inogara ichiteedzera ISO9001 mhando sisitimu uye ISO 14001 yezvakatipoteredza system. Kwekurasira zvigadzirwa 100% kupfuura bvunzo mishumo / fekitori hunhu se EN71-1, EN71-2, EN71-3, ASTM, VAVARIRA, BSCI, ISO9001, GSV, FCCA (nokuti Wal-Mart), FAMA (nokuti Disney).
Kambani Kufanirwa uye Zvitifiketi
Pakutanga, isu taingova fekitori diki iri muDongguan, vanhu vechidiki vakati wandei vaive nechinangwa chakafanana vakasarudza kutanga kubva padiki, vakapa nhamburiko yekuita zvinhu zvidiki zvakanaka. Hazvisi nyore, asi pakupedzisira fekitori yedu yakakura uye yakakura, uye takawana shamwari dzinowedzera nekufarira dzakabatana mumhuri huru iyi.
Mushure memakore ese aya, isu tanga tichiteedzera mutemo Hunhu-kutanga, vatengi kutanga, yega yega odha isu tichaomesa kuronga kwehunhu-cheki nemaitiro. Sefekitori yehunyanzvi, isu tinoziva kwazvo kuti zvakanaka mhinduro uye mukurumbira kubva kune vatengi vedu zvinotichengeta tichienda kumberi.
Zvishoma zvatinoda kutadza vatengi vedu. Isu takachengeta izvi mupfungwa, uye pakupedzisira, mamwe mazita anozivikanwa kana vatengesi vese vakavaka kubatana kwakadzama uye kusingaperi pamwe nesu, senge SPIN MASTER, TESCO, ALDI, RAKUTEN nezvimwe tinonzwa tichitenda zvikuru kune avo vane mukurumbira zvigadzirwa zvemunyika kutsigira. Uye isu tinovimbisa kuti ticharamba tichigadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, uye nekupa masevhisi makuru kune vese vatengi vedu vatinoda. Hatisi kuzokundikana kuvimba kwako nerutsigiro, pls ramba uchienda nesu, isu tine kutenda kwekuvaka ramangwana rakajeka pamwechete!
Kambani Nhoroondo Sumo
Tiri kuita fambiro mberi uye kuramba tichivandudza
Takagadzira mitsara mitsva yekugadzira uye michina miviri inopupuma
Isu takapemberera gore rechinomwe, zvakafanana nekubatanidzwazve kwemhuri, kuyeuka
kuseka uye kunetseka mukati memakore ano, kugovana nguva dzinofadza pamwechete
Akavhura hofisi yebazi kuGuangzhou, akavaka timu nyowani yekutengesa
Sekuwedzera chikumbiro chebhizinesi, fekitori yedu inoenda kuguta reHuizhou, nzvimbo yakakura kwazvo yeindasitiri
Takatenga michina inopupuma makumi masere kusangana nezvinodiwa nemirairo.
Takatanga sefekitori diki ine timu diki muDongguan guta
Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, AMP Mobile Floor Rakajeka, Yepasi Yekunze Exercise Mat, Floor Furo Rakajeka Mat, Floor Mat Puzzle, Floor Puzzle Mat Cushion, Floor Furo Rakajeka, Zvese Zvigadzirwa